သတင်း - Tyre Valve ဆိုတာ ဘာလဲ နဲ့ Tyre Valve ရဲ့ ပုံစံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မြေနဲ့ထိတွေ့တဲ့ မော်တော်ကားရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းကတော့ တာယာပါ။တာယာများသည် အမှန်တကယ်တွင် တာယာကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် ယာဉ်၏အလားအလာကို ရောက်ရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။တာယာများသည် ယာဉ်တစ်စီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ခံစားမှု၊ ကိုင်တွယ်မှုနှင့် အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဘေးကင်းရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ရော်ဘာတာယာများသာမက တာယာအဆို့ရှင်သည်လည်း တာယာ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tyre Valve ဆိုတာ ဘာလဲ
တာယာအဆို့ရှင်သည် အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် လေဝင်လေထွက်ပေါက်မရှိသော တာယာ သို့မဟုတ် ပြွန်၏နေရာကို ဝင်ရောက်နိုင်စေကာ တာယာ သို့မဟုတ် ပြွန်အတွင်းလေများထွက်မလာစေရန် လေဖိအားဖန်တီးပေးကာ အလိုအလျောက်ပိတ်ကာ လေဖိအားကိုဖန်တီးပေးသည့် တာယာအဆို့ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။တာယာအစိုင်အခဲများမှလွဲ၍ အခြားတာယာများ သို့မဟုတ် လေဖြည့်ပေးရမည့် အတွင်းပြွန်များအားလုံးသည် ဤစက်ပစ္စည်းဖြင့် ဖောင်းကားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Tyre Valve ၏ပုံစံမည်မျှရှိသနည်း။
တာယာအဆို့ရှင်များ၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုသည် မည်သည့်ကဏ္ဍများကို အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်အပေါ် မူတည်ပါသည်။၎င်းကို အသုံးပြုသည့် မော်ဒယ်မှ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းကို valve ၏ ပစ္စည်းမှ ခွဲခြားနိုင်သည်။မတူညီသော စံနှုန်းများအောက်တွင် အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။စည်းဝေးပွဲလမ်းစဉ်အလိုက် အောက်ပါတို့ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ရော်ဘာ snap-inနှင့်မြင့်မားသောဖိအားသတ္တုကုပ်-in.
tubeless ရော်ဘာ snap-in valve တွင် အမြင့်ဆုံးအေးသောတာယာဖောင်းပွမှုဖိအား 65psi ရှိပြီး ကားများ၊ အပေါ့စားထရပ်ကားများနှင့် အပေါ့စားနောက်တွဲများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အဓိကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။အနားကွပ်ရှိ 0.453" သို့မဟုတ် 0.625" အချင်းအပေါက်များကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် Rubber snap-in valves များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အရှည် 7/8" မှ 2-1/2" အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။အခြေခံအားဖြင့်၊ အဆို့ရှင်သည် စံအဖြစ် ပလတ်စတစ်အဖုံးပါလာသော်လည်း ၎င်းကို ဘီး၏အသွင်အပြင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် chrome ဦးထုပ် သို့မဟုတ် ကြေးနီအဖုံးဖြင့်လည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ဖိအားမြင့်သတ္တု Clamp-In Valves
ဖိအားမြင့်သတ္တု pinch valve သည် ကားမော်ဒယ်တိုင်းနီးပါးနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ကားများနှင့် တစ်နာရီ မိုင် 130 ထက်ပို၍ ပြင်းထန်စွာ မောင်းနှင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကားများနှင့် ယာဉ်များအတွက် သတ္တုအဆို့ရှင်များကို အကြံပြုထားပါသည်။သတ္တုပေါင်ချိန် အဆို့ရှင်သည် ထိန်းသိမ်းထားသော nut ကို တင်းကျပ်နေစဉ် ဘီးကို ရော်ဘာ gasket ဖြင့် ချုပ်ထားသည်။သတ္တုညှပ်အဆို့ရှင်များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံစံသည် ဘီးအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားသော nut ကို ဝှက်ထားနိုင်သော်လည်း အပြင်ဘက်တွင် ထိန်းထားသည့် nut ပါသူများသည် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း nut ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ချိန်ညှိခွင့်ပြုခြင်း၏ လက်တွေ့ကျသော အကျိုးကျေးဇူးကို ပေးပါသည်။ ဘီးမှတာယာတင်းကျပ်မှုကိုမဖယ်ရှားဘဲ။သတ္တု pinch အဆို့ရှင်များသည် အမြင့်ဆုံး အလုပ်လုပ်သော ဖိအားကို 200 psi ခွင့်ပြုထားပြီး 0.453" သို့မဟုတ် 0.625" အနားကွပ်အပေါက်များ၊ 6mm (.236") သို့မဟုတ် 8mm (.315") holes များကဲ့သို့ အထူး applications များ တပ်ဆင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tyre Valve ရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုပြောပြမလဲ။
ရော်ဘာအဆို့ရှင်အတွက်၊ မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။valve သည် အဓိကအားဖြင့် ရော်ဘာ၊ valve stem နှင့် valve core တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။အသုံးများသောရော်ဘာများထဲတွင် သဘာဝရော်ဘာနှင့် EPDM ရော်ဘာတို့ဖြစ်သည်။အဆို့ရှင်ပင်မပစ္စည်းကို ကြေးဝါနှင့် အလူမီနီယမ် ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။valve core ကို အများအားဖြင့် brass core ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း အချို့သော ဒေသဆိုင်ရာ စျေးကွက်များတွင် zinc core ၏စျေးနှုန်းသည် အတော်လေး ချိုသာသောကြောင့် zinc core ကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ကြသည်။ယေဘူယျအားဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်အဆို့ရှင်များအတွက် ကြေးဝါပင်စည်နှင့် ကြေးဝါအူတိုင်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သဘာဝရော်ဘာနှင့် EPMD ရော်ဘာ ကွာခြားချက်ရှိပါသလား။
ပထမဦးစွာ၊ သဘာဝရော်ဘာကို ရော်ဘာပင်များကဲ့သို့ အပင်များမှရရှိပြီး EPDM ရော်ဘာကို အတုဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။EPDM ရော်ဘာထုတ်ကုန်များသည် အိုမင်းရင့်ရော်ပြီးနောက် မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်လာကာ သဘာဝရော်ဘာထုတ်ကုန်များသည် အိုမင်းပြီးနောက် နူးညံ့စေးကပ်လာပါသည်။
EPDM ရော်ဘာ၏ အပူအိုမင်းခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်သည် သဘာဝရော်ဘာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။EPDM ရော်ဘာ၏ လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် EPDM ရော်ဘာ၏ လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်တို့သည် သဘာဝရော်ဘာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။EPDM ရော်ဘာ၏ ရေစိုခံ၊ အပူလွန်ကဲသော ရေနှင့် ရေခိုးရေငွေ့ စွမ်းဆောင်ရည်သည် သဘာဝရော်ဘာထက် များစွာသာလွန်သည်၊ အထင်ရှားဆုံးသော စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဖလိုရင်းရော်ဘာထက်ပင် ဖိအားမြင့်သော ရေနွေးငွေ့ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊အခြားအားသာချက်မှာ EPDM ရော်ဘာသည် ကာဗွန်အနက်ရောင်အမျိုးမျိုးနှင့် ဖြည့်စွက်စာများဖြင့် ဖြည့်နိုင်သည့် အကြီးဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။၎င်းသည် ထုတ်ကုန်၏ ဂုဏ်သတ္တိများစွာကို မထိခိုက်စေပါ။
ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး အဆို့ရှင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းပေါင်းစပ်မှုသည် ဖြစ်ပါသည်။EPDM ရော်ဘာ + ကြေးဝါပင်စည် + ကြေးဝါအူတိုင်.
ကြည့်ပါ။Fortune ရဲ့ Rubber & Metal Tyre Valves လေးပါ။
တင်ချိန်- ဧပြီလ ၂၉-၂၀၂၂